बलिउडमा मनिषा कोइरालाको कुन कुन नायकसंग नाम जोडियो ? – Tufan Media News
बलिउडमा मनिषा कोइरालाको कुन कुन नायकसंग नाम जोडियो ?
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १०:०५
सौदागर, मन, १९४२ अ लभ स्टोरी , दिल से, अग्नी साक्षी, अकेले हम अकेले तुम जस्ता सुपरहिट फिल्म दिएकी उनी ९० को दशकमा निकै चम्किएकी थिइन् । उनले पाचवटा भाषाको लगभग ८० भन्दा बढी फिल्म खेलिन् ।मनिषाको बलिउड करियर सन् १९९१ बट सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागरबाट भएको हो ।
उनी त्यसबेलाका लिजेन्ड कलाकार राजकुमार–दिलीपकुमारसँग एकसाथ ठूलो पर्दामा देखिएकी थिइन् । यही फिल्म उनको सबैभन्दा ठूलो ब्लकबस्टर हिट फिल्म साबित भयो । करियरको पूर्वाद्ध सानदार रह्यो । उनी रातारात हिट भए ।